Dhukaasa fi Dhohinsa Waagaaduuguu Burkiinaa Faasootti Harra Dhaqqabe
Hoteelota guguddoo fi beekamoo walakkeessa magaalaa Waagaaduuguu ka biyya Burkinaa Faasoo ka biyyoonni Addunyaa gama Dhihaa deemuu baay’isan keessaa har’a galgala dhukaasaalee fi dho’insawwan dhaga’amani jiran. Gabaasaan keenya bakka sana jiru akka jedhutti, hoteela miidhagaa, karaa guddaa walakkeessa magaalattii jiru qarqara jiru fuul-duratti konkolaataan tokko ibiddaan belbele.
Namoota biyyoota addunyaa gama dhihaa fi hojjetoota Tokkummaa Mootummootaa tu hoteela kanatti heddummaata. Akka gaazzexeessonni AFP tilmaamuu yaalanitti, hukaasaaleen sun namoota sadii ka shaashii marataniin ka dhukaasame ta’uu hin oolu.
Namni ijaan arge tokko akka madda oduu AFPtti himetti, kaaffeen hoteelicha fuullee karaa gamatti argamu fi namoonni alaa itti heddummaatan, ka” Le Cappuccino” jedhamus akkasuma namoota hidhataniin haleelamee jira. Humnoonni naga-eegumsaa haga oduun kun gabaasametti bakka sana hin dhaqqabne.
Dhukaasa fi Dhohinsa Waagaaduuguu Burkiinaa Faasootti Kaleessa, Amajjii 15, 2016, Dhaqqabe